30 milyan ka badan oo wax isdhaafsi ah ayaa cardano koyn la isku dhax dhaafsaday… – Kiribto Somali Media
Waxaa maalin walba soo kordhaya guulaha dhinaca hor’umarka ah ee blockchainka cardano uu gaarayo gaar ahan bishan fibaraayo labadii bishan ayey shirkada IOHK oo ah shirkada ka shaqeysa sidii hor’umar uu ugaarsin lahayeen cardano.
IOHK ayana baahisay in saro loo qaaday balaca inta wax isdhaafsi ee blockchainka cardano laguna daray 11% boqolkiiba. Taas oo ka dhigaysa in xirmo walba oo wax isdhaafsi cabirkeedu gaaro 80.kilobytes una ogolaaneysa in xirmooyinka cardano ee sakan walba dhaca, ay qaadi karayaan malayiin wax idhaafsi.
Sida laga arkayo google data studio. 8dii bishan wuxuu diiwan galshay in cardano blockchain wax iskdhaafsigiisa kor u dhaafay 30.4 milyan halka bishii janaayo ee sanadkan wax is dhaafsiga uu ahaa 10 milyan, warbixintan iyo war bixino kale waxan ku falanqeyneynaa muuqaalkan
Caradano ama (ADA) Oo Guulo Cusub Ku Tilaab Sanaya Waxa Dhawaan Is badalaya Qiimaha La Kala Sii Sanayo ADA